Ny divay mandany rivo-doza any amin'ny nosy iray any Richard Branson - Natao tany Espaina izahay
Posted On 9 Janoary, 2019 16 Febroary, 2019 By HB
Ny nosy Necker no anaran'ilay nosy tsy miankina Richard Millennial Richard, izay ao amin'ny faritra avaratr'i Nosy Virijiny, izay nandalovan'ny rivo-doza Irma nandritry ny alatsinainy ny zava-drehetra teny an-dalana. Tsara homarihina fa Irma, rivo-doza 5 sokajy 5, dia iray amin'ireo mpanimba indrindra amin'ny zavaboary, antsoina hoe "rantsan-tànan'Andriamanitra" ao amin'ny sarimihetsika 90 malaza, Twistter.
Ankoatra ny zavatra hafa, Richard Branson dia manana lakaly ambanin'ny tany izay nanapa-kevitra ny hialokaloka mandra-pahatonga an'i Irma nandalo ny ekipany. Nilaza ihany koa izy fa ireo trano fametrahana azy ao amin'ny nosy dia vonona ny hanohitra ny fepetra amin'ny sisin-tany, na dia misy zavatra vitsivitsy afaka manohitra ny rivo-doza 5 aza dia tsy azony antoka mihitsy.
Saingy ny marina dia niaritra ny varotra, fa tsy ny sisa tamin'ny nosy, izay simba. Hoy i Branson, rehefa avy ny rivo-doza taty aoriana: "Nialoka tany amin'ny rivo-doza mahery indrindra izahay, izay tao anatin'ny fivarotana vintana iray, ary tena nifikitra mafy tokoa. Ny eritreritsika dia miaraka amin'ireo tratran'ity loza ity any amin'ny faritra rehetra any amin'ireo nosy Virginie, any Karaiba ary any ivelany "
Talohan'ny rivo-doza dia nanitrikitrika i Branson fa rehefa mipetraka ao amin'ny trano fitehirizana iray izy sy ny ekipany, dia mety ho kely kokoa ny tavoahangy sisa raha miditra. Ary ara-dalàna izany, ny divay dia mety ho namana mahafinaritra amin'ny fotoan-tsarotra sy fialofana miaraka amin'ny olona marobe. Tsy misy fomba tsara kokoa handaniana fotoana ahafahan'ny tetik'ady tsara indrindra hanakanana izay mitranga any ivelany fa tsy amin'ny tavoahangin-divay, ary ny fahafantarana azy bodegaAzo antoka fa tsy hanjary divay mahery izy ireo.
Necker & faritra manontolo tanteraka. Hevitra miaraka amin'ny rehetra voakasika amin'ny rivo-doza #Irma. Misaotra ny fanohanana https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK
- Richard Branson (@richardbranson) 7 Septambra amin'ny 2017
Fitsangatsanganana La Rioja, The Ribera del Duero, Bordeaux, Entre Deux Meres na La Toscana, ary ny lohany dia mifantoka amin'ny fankafizana ny fofona sy ny sombin'ny divay tsara indrindra eran'izao tontolo izao ... Mamakafaka, mianatra ary mahita ny teknika ampiasain'ireo mpamboly amin'ny famokarana, ny toetrandro ny faritra nandritra ny taom-pijinjana, ny fotoana nialan'ny divay mandra-panokafanay azy nandritra ny rivo-doza iray, ary ireo tsiambaratelo rehetra ireo izay mandrakotra ny tavoahangy divay.
Nandritra ny alina dia nisy rivotra sy orana nandritry ny rivo-doza #Irma Ny sisiny dia akaiky kokoa - ny rehetra dia miondrika sy mitraka https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/lbM0bdHxCv
- Richard Branson (@richardbranson) 6 Septambra amin'ny 2017
Ary raha manara-maso ireo divay ireo kafe o Iberian ham, afaka manova fotoam-pahoriana ianao ao anatin'ny fahasambarana madio. Ary ny zava-drehetra dia azontsika atao ny manolotra tahotra sy mandany ny alin'ny rivo-doza mitopatopa, miaraka amin'ny masontsika mihidy sy mivavaka, na afaka mamadika ny toe-javatra manodidina ary manararaotra izany. Azontsika antoka fa ny Sir Richard Branson sy ny ekipany no nanao ny ankamaroan'ny fotoana nijanonany tao amin'ny trano fivarotana, noho i Irma.
Miandry ny herin'ny rivo-doza #Irma Ao anatin'ny ora 4 dia hiverina any amin'ny trano famiazan'ny divay izahay https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v
Tagged: Bodega/rivo-doza/Virgin Islands/Richard Branson/divay
Next post: Bodegas Pradorey, voafidy tao Ribera del Duero